၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် ကြေညာဂုဏ်ပြုပွဲ - Citizen of Burma Award
You are here: Home / Announcement / ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် ကြေညာဂုဏ်ပြုပွဲ
မြန်မာပြည်သားခြင်းရိုင်းပင်းကူညီ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ☮
“၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် ကြေညာဂုဏ်ပြုပွဲ”
အောက်ဖေါ်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက် အားပေးပါရန် ရပ်နီး ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေများကို နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ( ၆ ) ရက်၊ စနေနေ့
အချိန်။ ။ ညနေ ( ၄ ) နာရီ မှ ည ( ၇ ) နာရီ ထိ ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား
ည ၇ နာရီမှ ည ၈း၃ဝ ထိ အကျွေးအမွေးတို့ဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
ေနရာ။ ။ Washington High School, 2217 West Glendale Avenue, Phoenix, Arizona 85021.
မှတ်ချက်။ ။(၁) ဝင်ကြေးမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ကြွရောက်လာသည့် ဧည့်ပရိသတ်ကို အက၊ဂီတ ဖျော်ဖြေခြင်းအစီအစဉ် အနည်းငယ်ဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
(၂) မြန်မာပြည်မှ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဂုဏ်ပြုဧည့်သည် အကယ်ဒမီဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ( Managing Director, Communications Services Group Co.,Ltd) နှင့် ဖလော်ရီဒါမှ ဖိတ်ကြားထားသည့် အထူးဧည့်သည် ဆောင်းဦးလှိုင် ( Music Composer / Producer ) တို့လည်း ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပါမည်။
ကြွရောက် အားပေးသူ အားလုံးကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုမြင့်လွင် ( 602-793-1090 )၊ မဥမ္မာဗိုလ်၊ ( 480-387-4031 )၊ ကိုအေးမြင့်၊ ( 480-570-2451 )၊ ကိုဟံဝင်းချို၊ ( 480-799-2374 )၊ ကိုထွန်းထွန်း ( 602-628-7110 )
10th ANNUAL CITIZEN OF BURMA AWARD CEREMONY – PHOENIX – ARIZONA
☮ Honoring Volunteer Spirit of Burmese Helping Burmese ☮
“ We would like to cordially invite you to attend the 10th Annual Citizen of Burma Award Ceremony.”
Time:4pm –7pm ( light Dinner will be served from7pm to 8:30 pm.)
Venue:Washington High School,
2217 West Glendale Avenue,
Note: (1) Free Admission and light Entertainment.
(2) The Guest of Honor from Yangon, Academy Swe Zin Htaik ( Managing Director, Communications Services Group Co.,Ltd ) and
the Special Guest from Florida, Song Oo Hlaing ( Music Composer / Producer ) will attend this honoring event.
We sincerely appreciate your attending and support.
Event Contact: Ko Myint Lwin ( 602-793-1090 ), Ma Ohnmar Bo ( 480-387-4031 ), Ko Aye Myint ( 480-570-2451 ), Ko Han Win Cho ( 480-799-2374 ), Ko Tun Tun ( 602-628-7110 )
February 28, 2019January 27, 20200
၂၀၁၉ ခုနှစ် (၁၀) ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ ။ ရက်စွဲ – ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက် တနင်္လာနေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂ /၂ဝ၁၉ )